If the Burmese people can sanction the illegitimate junta from within, what’s stopping the EU and UK? - EIA
If the Burmese people can sanction the illegitimate junta from within, what’s stopping the EU and UK?
It’s been almost four months since the corrupt Myanmar military seized power inabloody coup, so why are some countries still dragging their feet over sanctions?
The US Department of the Treasury has already slapped sanctions on Khin Maung Yi, the Minister for Myanmar’s Ministry of Natural Resources, Environment and Conservation, and the State-run Myanmar Timber Enterprise (MTE), closely followed by sanctions from Canada.
Myanmar Timber Enterprise log depot (c) EIA
But while the UK has applied some limited sanctions, both it and the EU have yet to takeabroad position comparable to that of the US.
Now, EIA’s Forests campaigners have learnt from partners on the ground in Myanmar that the junta’s plan to cash in onamajor auction of illicit timber has been ingeniously scuppered from within.
The auction held by the MTE, which controls all timber sales in and from the country, was intended to sell off thousands of tonnes of timber, including approximately 203,209 tonnes of illegal timber seized during the last term of the legitimate National League for Democracy Government.
Initial speculation indicated the auction would be aiming for international traders, but it appears to have been restricted to the domestic trade for processing and furniture-making.
The MTE operates in an extremely opaque manner, but our sources in the country indicate its auction – for which serious traders had to placeadeposit $10,000 before bidding – was undermined by traders who paid to participate but then worked together to sabotage the auction and ensure notasingle piece of timber was sold.
“This is absolutely amazing and shows just how committed the ordinary Burmese are when it comes to reclaiming the country stolen from them in this violent coup,” said Faith Doherty, EIA Forests Campaigns Leader.
“It also begs the question that if the people in Myanmar are prepared to take such great risks to sanction and boycott their own auctions, then what’s delaying meaningful sanctions from the EU and UK?
“The very least the EU and UK can do is to support the Burmese people with strong measures of their own in the form of sanctions, especially against exploitation of natural resources such as timber.”
Ahead of the auction, the country’s National Unity Government in exile issuedastatement to warn that if anyone engaged in the auction, they and their business would be blacklisted.
EIA campaigners and our in-country partners have been monitoring seizures throughout the years and have long been warning timber traders seeking to import Burmese teak and other precious hardwoods from Myanmar that, without clear and verified information on its origin, all timber imported from the country is illegal.
* Find out more about Myanmar’s tainted timber in our online resource.
မြန်မာပြည်သူတွေက စစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့နိုင်ချိန်မှာ ယူကေနဲ့ အီးယူက ဘာ့ကြောင့်မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေသလဲ
မြန်မာ အကျင့်ပျက်စစ်တပ်က သွေးထွက်သံယို အာဏာသိမ်းမှု လေးလ နီးပါး ကြာလာချိန်တွင် အချို့နိုင်ငံများက မြန်မာစစ်အစိုးရအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရန် နှောင့်နှေးနေသေးသည်မှာ စဉ်းစားရကျပ်စရာပင် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တကွ မရှေးမနှောင်းမှာပင် ကနေဒါနိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီနှင့် အစိုးရပိုင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်၏။
သို့ရာတွင် ယူကေနိုင်ငံသည် မြန်မာစစ်အစိုးရအား အတိုင်းအတာ တခုအထိ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ယူကေနှင့်တကွ ဥရောပသမဂ္ဂ အီးယူသည်လည်း အမေရိကန်ချမှတ်ခဲ့သော စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကဲ့သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ချမှတ်ခြင်း မရှိသေးချေ။
EIA ၏ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ သိရှိလာရသည်မှာ စစ်အစိုးရက တရားမဝင်သစ်များ လေလံတင်ရောင်းချပြီး ငွေရှာမည့် အကြံအစည်သည် သစ်တောဌာနအတွင်းမှပင် ပြောင်မြောက်စွာ ဒေါက်ဖြုတ်ပျက်စီးခြင်း ခံလိုက်ရသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး၏ သစ်တင်သွင်းမှုနှင့် တင်ပို့မှု အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားသော မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် ယခင်တရားဝင် NLD အစိုးရ လက်ထက်အတွင်းက တရားမဝင်သစ်အဖြစ် ဖမ်းဆီးထားသော သစ်တန်ချိန် ခန့်မှန်းခြေ ၂၀၃,၂၀၉ အပါအဝင် သစ်တန်ချိန် ထောင်ပေါင်းများစွာကို လေလံတင်ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားခဲ့၏။
အဆိုပါ လေလံပွဲသည် ကနဦး ခန့်မှန်းချက်အရ ပြည်ပဈေးကွက်အား ပစ်မှတ်ထားသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ၄င်းသစ်တို့ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ သစ်အချောကိုင်ရေးနှင့် ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်ရေးတို့အတွက်သာလျှင် ကန့်သတ် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ၏။
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လွန်စွာ မပွင့်မလင်းရှိလှသည် မှန်သော်လည်း ပြည်တွင်းရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ သိရသည်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တသောင်း စပေါ်ပေးရသော အဆိုပါ လေလံပွဲတွင် ထိုသို့ပေးသွင်းလိုက်သော ကုန်သည်များ စည်းရုံးတိုင်ပင်ပြီး သစ်များလုံးဝရောင်းမထွက်အောင် လုပ်လိုက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒါဟာ တကယ့်ကို ဝမ်းသာစရာ သတင်းဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် မြန်မာပြည်သူလူထုက ဘယ်လောက်အထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်ကြသလဲ ဆိုတာကို ပြလိုက်တာပါပဲ” ဟု EIA ၏ သစ်တောရေးရာ လှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ရေးခေါင်းဆောင် ဖိတ်သ် ဒိုဟာတီက ဆို၏။
“အခုလို မြန်မာပြည်သူတွေကတောင် သူတို့စစ်အစိုးရရဲ့ လေလံပွဲကို အနစ်နာခံ၊ အန္တရာယ် အဖြစ်ခံပြီး စစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အီးယူနဲ့ ယူကေတို့အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ထိမိတဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ဖို့ ဘာ့ကြောင့် နှောင့်နှေးနေရသလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။”
အခုလို လေလံပွဲမလုပ်ခင်မှာ အာဏာသိမ်းခံ အစိုးရဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်း ဒီလေလံပွဲမှာ ပါဝင်သူတွေနဲ့ ၄င်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမယ် ဆိုပြီး သတိပေးခဲ့၏။
EIA ၏ သစ်တောရေးရာ လှုံ့ဆော်လှုပ်ရှားသူများနှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ EIA ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှုများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်ကြည့်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွန်းသစ်နှင့်တကွ အခြား အဖိုးတန်သစ်မာများကို ဝယ်ယူတင်သွင်းလိုသော သစ်ကုန်သည်များကိုလည်း ထွက်ရှိရာ ဇစ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အတည်ပြုထားခြင်း မရှိသော သစ်မှန်သမျှသည် တရားဝင် သစ်မဟုတ်ကြောင်း အစဉ်တစိုက် သတိပေးနေခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားမဝင်သစ်များနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းအရင်းအမြစ် အချက်အလက်များကို EIA ၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထပ်မံသွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Myanmar junta is looking to line its pockets and fund the coup with massive auction of illegal timber